Ifulethi elihamba phambili eline-spa yangasese ne-sauna - I-Airbnb
Ifulethi elihamba phambili eline-spa yangasese ne-sauna
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Sandrine
Enhliziyweni yemizila ye-cross-country kanye ne-alpine ski kanye nezindlela eziningi zokuhamba izintaba.
Itholakala phakathi kwemizuzu eyi-10 neyi-15 ukusuka enkabeni yeBresse, eLake Gerardmer kanye naseCol de la Schlucht, imizuzu emi-5 ukusuka eLakes Longemer naseReturnemer, imizuzu engama-30 ukusuka eMunster kanye nemizuzu engama-45 ukusuka eColmar nokunye okuningi okungenzeka.
Ifulethi elisha elihle elihle elihle elitholakala ngaphansi kwemigwaqo enqamula izwe namamitha angama-800 ukusuka emithambekeni ye-LA BRESSE HONNECK kanye nokuhamba ngezinyawo okuningi nokuhamba ngamabhayisikili.
Ifakwe i-spa yayo yokwelapha enezihlalo ezi-3 (i-hotspring) yangasese kule ndawo yokuhlala, ibekwe endaweni evulekile ebheke eningizimu ye-12 M2 ifakwe itafula elinezihlalo ezi-4 kanye ne-parasol esitezi sesibili nesokugcina (ngaphandle kwezitebhisi) lapho ungabuka khona okhexisayo phezu zokushushuluza eqhweni.
I-sauna yayo yabantu abangu-4 efakwe endlini yokugezela kanye neshawa yayo ebanzi yase-Italy, ifulethi alinayo i-wifi kodwa i-4G ihamba kahle kakhulu, indlu yangasese ehlukene, isomisi, umshini wokuwasha, ibhodi loku-ayina nensimbi.
Igumbi lokulala elilodwa elinombhede kagesi onomatilasi we-Tempur memory foam angama-32-intshi kanye nekhabethe lokugcina.
Igumbi lokulala lesibili elinombhede wamanzi ukuze uthole ukunethezeka okwengeziwe (kwezokwelapha) kanye nekhabethe.
Ekugcineni, igumbi lokuphumula elingu-28 m2 elinekhishi elihlonyiswe ngokugcwele elinemishini ye-pancake ne-fondue raclette, kanye nomenzi wekhofi we-nespresso, i-teapot neketela.
isikrini esiyisicaba esingu-50 intshi kanye nosofa ntofontofo ngaphandle kokukhohlwa indawo yokupaka engaphansi komhlaba
Imibhede yamanzi engu-1
Indawo yokuhlala itholakala ngokuthula